← किन भइरहेको छ चीनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र ?	यस्तो छ, माधव नेपालको भारतीय दलाली →	एमालेले दुखायो सल्लाहकारको चित्त	06
माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका विषयमा उठाएकारो मुद्दा जायज रहेको तर्क गर्दै यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु सट्टा आन्दोलनमा उत्रे दमन गर्छु भन्नु नाजायज भएकोसमेत अधिकारीले बताए । वामपन्थी आन्दोलनको ध्वंस गर्ने काम एमालेले गरेको आरोप लगाउंदै अधिकारीले भने – प्रतिक्रियावादीहरूले एमालेको कांधमा बन्दुक राखेर माओवादीविरुद्ध पड्काउंदासमेत ऊ आंखा चिम्लेर बसिरहेको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुक दुवैलाई भड्खालोमा हाल्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई नयां राजा बनाउने अभियानमा एमाले लागेको बताउंदै अधिकारीले इमानदार र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारीले सेनापतिको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम नाजायज र गैरसंवैधानिक भएको बताए । एमालेले यस विषयमा गम्भीर गल्ती गरेको छ । राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न पाइनुपर्छ, यो संवैधानिक अधिकार भएको अधिकारीको भनाइ छ । माओवादी आन्दोलनलाई माधव नेपालले गुन बिर्सिएर दमन गरे एमाले प्रजापरिषद्जस्तै पार्टीमा परिणत हुनेसमेत उनले खुलासा गरे ।
एमालेले हाम्रो सल्लाह मानेन – लक्ष्मीभक्त उपाध्याय केन्द्रीय सल्लाहकार नेकपा -एमाले
सामन्त, दलाल नोकरशाहहरूको बचेखुचेका सामन्तवादी शक्तिहरू, यहांका विदेशी इसारामा नाच्ने तत्त्वहरू नै हुन् । साम्राज्यवादका दलालहरू नेपालमा प्रशस्त देखिन्छन् । तिनले कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न दिंदैनन् । कम्युनिस्टका नेताहरू हरबखत विदेशी शक्तिका सामु झुक्न थाले र उनीहरूबाट किनिन थाले । त्यसले गर्दा मुलुकको दुर्दशा भयो । कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यलाई खत्तम पार्दै गयो । तात्कालिक घटना जुन राष्ट्रपतिको विषय छ । राष्ट्रपति ईश्वर होइन । मान्छेले गल्ती गर्छ । गल्ती नगर्ने मान्छे होइन । राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई ज्ञानेन्द्रको पालामा शेरबहादुरको सरकारलाई फाल भनेर एमाले र कांग्रेसले बिन्ती चढाए राजालाई । राजाले त्यही आडमा ‘कु’ गरे । त्यहीखालको कदम चाल भनेर हाम्रा साथीहरू राष्ट्रपतिकहां पुगे । राष्ट्रपतिको कदम नचाहिंदो कदम हो । सेनापति फाल्नु ठीक थियो, थिएन त्यो भिन्न विषय थियो । उत्तिखेर राष्ट्रपतिले कदम चालेर सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रहार गर्नु राम्रो थिएन । त्यो एकखालको दुर्भाग्य थियो । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । अहिले जनताको ठूलो स्थान भनेको संसद हो । संसद्ले जे पनि गर्न सक्छ । संसद्मा राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्न पाइन्न भनियो भने हिजो राजाका बारेमा संसद्मा बोल्न पाइन्न भन्नेजस्तै भयो ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टीको बीचको मिलनबिन्दु भनेको छलफल र वार्ता नै हो । चुनाव वा क्रान्ति दुवै हाम्रालागि उपयुक्त देखिन्छ । चुनावबाटै नै हामीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्छौं । त्यस्तो सुनौलो सम्भावना हुादाहुादै हामी प्रतिक्रियावादीहरूसाग गठबन्धन गरेर मिलेर जानु राम्रो थिएन । कम्युनिस्ट शक्तिबीच सरसल्लाह गर्ने, पार्टीलाई एकता गराएर लाने, काममा लाग्नुपर्थ्यो । कम्युनिस्टहरू मिल्नूस्, झगडा नगर्नुस् भनेर हामीले भनेका भन्यै छौं । हाम्रो झन्डा एउटै हो, दर्शन एउटै हो । हाम्रा शत्रु एउटै हुन्, मित्र एउटै हुन् । शान्तिपूर्ण नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो भनेर सबैले भनेपछि त्यो बारेमा किन नमिल्ने ?
← किन भइरहेको छ चीनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र ?	यस्तो छ, माधव नेपालको भारतीय दलाली →	2 responses to “एमालेले दुखायो सल्लाहकारको चित्त”	Nitu Bhutani	नोभेम्बर 7, 2009 at 12:46 बिहान	पछिल्लो समय नेपाली राजनितीका केन्द्रमा खेल्न चाहने कम्युनिष्ट नामधारि गद्दारहरूले भारतको कुटील चालवाजीमा फसेर नेपाल र नेपाली जनतामाथी निकै ठुलो विश्वासघात गरेको छ तर यसकत्र फल यसले अव निकट भविश्यमै पाउनेछ र हामी सवै यसकत्र लागी प्रतिक्षारत रहे हुन्छ ।
anima tuladhar	नोभेम्बर 9, 2009 at 12:58 बिहान	makune ra uml le sood bahek aru kaslai chitta bujhayeko chha ra ?